Home » Sirba afaan oromoo haaraa 2019 download
by Kashicage |Published 31.10.2020 | comments
Maqaa Miseensota Dhaaba keenyaa hundaan Baga Bara Haaraa waliin geenye oggaan jedhu gammachuu addaatu natti dhagahama. Haalli addaa fi abdachiisaan kun kan akka carraatti ofuma isaatiin argame ykn. Baga Gammadne! Kanneen lubbuu isaanii wareeganii haala kana argamsiisan seenaan isaanii bara baraan kan yaadatamuu fi galatni isaaniis Bilisummaa Ummata keenyaa haa tahu jechaa adeemsa gara jijjiiramaatti eegalame kana fiixaan baasuudhaan wareegama isaaniitti firii gochuuf waadaa keenya akka haaromsannu waliif dhaamna.
Bara keessa dabarre keessa Injifannoolee gurguddoo Qabsoon Bilisummaa Oromoo galmeesse keessaa tokko ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigaltee Hagayya 07, taasifamee dha. Waliigalteen seena-qabeessi sun lolli bara dheeraaf Ummata Oromoo kan Bilisummaa isaa falmatuu fi Mootummoota Itoophiyaa kan afaan qawweetiin Bilisummaa Ummatootaa sarban gidduutti gaggeeffamaa ture akka dhaabbatuuf kan karaa bane dha.
Waliigalteen sun Ummata keenyaafis tahe Ummatoota Itoophiyaa keessa jiran hundaaf, dabreetis Ummatoota Gaanfa Afrikaa hundaaf nageenyaa fi guddina waaraa argamsiisuu carraa gaarii akka tahe ABOn ni amana.
Duulli Olola maqa-balleessii fi lolli ifatti ABO irratti banamee jira. Duulli kun haqa qabsoo Saba Oromoo kan hanga ammaa dabsuu fi awwaaluu qofa osoo hin taane qabsichi itti fufee Galma isaa akka hin geenye ittisuuf kan akeekkate duula cubbuu fi yakka seenaa tahuutti amanna.
Rakkoo fi gaaffii waloo Saba Oromoo kan Jaarraa lakkoofsise akka rakkoo fi gaaffii Oromoota Godinoota murtaawoo qofaatti dhiheessuuf duula halkanii fi guyyaa gaggeeffamaa jiru shira gurmuu tokkummaa Oromoo laaffisanii Qabsoo isaa laamshessuu ti. Gaaffiin Bilisummaa fi mirgoota dimokiraasii kan Ummatootni barootaaf wareegama ulfaataa itti baasaa jiran qabsoo karaa nagaatiin deebii argata jedhamee waadaan EPRDF ummataaf seenes osoo oolee hin bulin guyyaa saafaa cabuu jalqabee jira.
Waan taheef, tarkaanfiileen shiraa kan adeemsa karaa nagaa eegalame kana gufachiisan akkasii hatattamaan akka irraa dhaabbataman gaafanna.
Dhimma Tokkummaa Jaarmayoota Oromoo Addi Bilisummaa Oromoo Tokkummaan Jaarmayoota Siyaasaa Oromoo barbaachistuu tahuu dursee hubachuudhaan dhimma kana akka imaammataatti irratti hojjechuu kan jalqabe bara moota irraa eegalee ti. Bara Kaartum Sudaanitti fi bara Asmaraa Ertiraatti milkaawina argame dabalatee sana boodas yeroo adda addaatti yaaliin ABOn Tokkummaa Jaarmayoota Siyaasaa kana argamsiisuuf taasise hedduu dha.
Tattaaffiilee kanaanis milkiin hin tuffatamne argameera. Jaarmayootni Siyaasaa Oromoo kanneen Kaayyoo wal fakkaataa qaban gaaddisa tokkicha jalatti gurmaawuu, kanneen Kaayyoo gara garaa qaban ammoo Kaayyoo isaanii qabatanii dantaa waloo Oromoo fi Oromiyaa irratti wal tumsuu kan isaan dandeessisu waltajjii waloo tokko uummachuun barbaacisaa tahuu ABOn oggayyuu itti amana.
Kana dhugoomsuufis gahee gaafatama gama isaa bahachuu irraa of hin qusatu. Haala haaraa amma uumame kan ODPn akka waan Ummatni Oromoo aangoo biyya bulchuu dhuunfateetti fakkeessuuf yaalu keessattis lolli kun Oromoo irraa dhaabbachuun hafnaan inumaa daranuu hammaatee itti fufuun isaa Ummata keenyatti hibboo tahee jira. Ummatni keenya akka lola kana irraa gahaatti of hin ittisne waggoota 27 dabraniif mancaa fi eeboon osoo hin hafin mootummaa EPRDFiin hiikkachiifamaa ture.
Ummatni keenya bakka hundaa dhimmi WBO dhimma nageenya Oromiyaa kana wajjin walitti hidhataa dha jedha. WBOn humna Bilisummaa fi nageenya Oromoo fi Oromiyaatiif ijaaramee Ummaticha keessa sossohuu fi Ummatichaanis jiraachifamu tahuu Ummatni keenya deddeebisee mootummaatti ibsachaa jira. Waan taheef nageenya Oromiyaa qofaaf osoo hin taane fiixa-bahiinsa daandii jijjiiramaa eegalame kanaafis WBOn abdii guddaa dha malee diina jedhamee ykn.
Xumura : Maayyii irratti jijjiiramni qabsoo Ummata keenyaatiin argame kun akka hin gufannee fi duubatti hin deebineef rakkoo dhalatu kamuu haasaadhaan furachaa galma barbaadamu kan Bilisummaa fi nageenyi ummatootaa itti mirkanaawu dhaqqabuuf ABOn gama isaatiin gaafatama isaa kan bahatu tahuu hubachiisna.
Barri haaraan kan bara dabree caalaa injifannoo daranii kan itti galmeessinu, tokkummaan mooraa qabsoo fi kan Ummata keenyaa daran kan itti jabaatuu fi Qabsoon Bilisummaa Ummata keenyaa daran kan itti finiinu akka tahu hawwii keenya ibsachaa, kana dhugoomsuufis hundi keenya jabaannee haa warraaqnuun Dhaama Adda Bilisummaa Oromoo ti. News Ticker. Copyright kichuu.Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Siddisee dha. Biiroo maaliif akka hin galle si gaafachuufin bilbile!
Maaliifuu haa bilbiltu. Dhufaan jira! Nan utaale. Dafqi bobaa jalaan na xuruuruu eegaleera. Siddiseen akkuma kaleessaa,akkuma tibba darbee ,akkuman guyyaan jalqaba ishee argee miidhagdeetti… Isa durii caalaayyuu! Seeqee callisuurra kan darbe homaa afuura hin baafanne. Isa dhiisiitii …ammas qaawwi xiqqoon yoo jiraatte hin beekaniiti dubbii mataa itti galfata taatu dubbadhu!
Jedhi kaa …jedhi malee! Dabeessa wayii! Isheef jechi kun qoosaa dha. Maali nagumaanii? Dargaggeessi hirriba hin quufu jedhani! Kolfi isaanii surraa qaba.
Caalaa Bultumee: 'Oromoof nan wareegama malee Oromoo hin ajjeesu'
Natti tola! Balbala cufee duubaan itti hirkadhee dhaabbadhe. Kolfi na cinqe. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Please select a letter from the index above to see entries.
Design by: Qubee Technologies oroict. Friday, April 17, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Oromoo Afoola Oromoo Maxxansa dhuunfaa. Barfachuun koo naa gale. Hamma Dubbifame: 13, Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa? Maaloo yaada kee barreessi. Maqaa keessan galchaa.Haacaaluun walleewwan Afaan Oromoo ciigoon masakaman, qor-qalbii fi yaada ummataa calaqqisiisan aartiin miidhagsee Kan biraa wanti haaraa hin jiru'' jedha.
Apr 17, Funyee Show. Unsubscribe from Funyee Show? Cancel www. Viidiyoowwan sirba Afaan Oromoo erga qulqullinaan hojjetamanii 'YouTube' irra Atakaaroo albama haaraa Abush Zallaqaa irratti miidiyaa hawaasummaarra Best Vedio Clip Full-Hd sirba afaan oromoo new today. Daani'eel Badhaadhaa "Weebilehoo" Skip to primary navigation Skip to content Skip to primary sidebar Business Jobs Finance Market Politics Entertainment Celebrities Celebs Movies Lifestyle Sports NHL MLB NBA NFL Blue Jays Golf Tennis Technology Gaming Science Research Software Health Kid Food Travel Rumors Weather RSS desawar satta chart record december did aly raisman have a nose job dead zed 2 unblocked games at school hotmail noticias deportes entretenimiento pastor rance allen death connie payton net worth systems exams council zm ocrs st lucia dbs obituaries marci moran tater bra wdupload com hebeheaven jailbait phantom fireworks homepage today numeros de meninas que mandam nudes ed bolian net worth batman trailer logan style map of the soul bts tracklist why do we celebrate st valentines day ahead of barr complaining about trump's tweets, the president complimented the ag michael jordan xbox one call of duty tournaments queen of katwe movie rating.
Sirba Afaan Oromoo haaraa ,Suuraa Taakkala.Sirbi qeenxee mata duree 'Jirra' jedhuun weellisaa Haacaaluu Hundeessaan tibbana gadi dhiise gamanumaan jaalatamumma guddaa horateera. Haacaaluun walleewwan Afaan Oromoo ciigoon masakaman, qor-qalbii fi yaada ummataa calaqqisiisan aartiin miidhagsee gurra uummataan gahuun beekkamtii guddaa horate. Weellisaa Daawitee Makonnin fakkeenya isaa kan godhate Hacaaluun muuziqaan hiree ganamaa isaa akka ta'e amana. Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbileefi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera.
Naannoo manneen barnootaafi gumiiwwan keessatti sirbuu itti fufe. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa kana hin jaalanne. Addee Guddattuu Horaan garuu gammadoo turan. Sirbituun mana hin godhattu alalee taati,'' jechuu isaanii har'as yaadata.
new oromo muisc/sirba haaraa afaan oromoo/ምርጥ የ ኦሮምኛ ዘፋን
Shakkamee akka hidhame dubbata. Kan biraa wanti haaraa hin jiru'' jedha. Karchallee Amboon alatti Finfinnee dhufees torban tokko Ma'ikalaawii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufan, ''Jabaadhu gurbaa, hidhaan qoraasuma dhiiraati! Manni hidhaa garuu waan abbaan isaa isarratti jibban akka guddifatu isa gargaare.
Hacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e. Kanan bare mana hidhaa sana keessatti. Albama jalqabaa keessaa sirboota sagal achittin fixee bahe. Walaloos yeedaloos barreessee.
Manni hidhaa Amboo Haacaaluuf mana barumsaa ture. Namoota gurguddaarraa akka galaa galaafate yaada qaba. Akka abbaan jedhanis qoraafameera. Waan hunda of-eggannoodhaan akkan raawwadhu na taasise. Abbaan isaa har'as karaa ilmi isaanii filatetti hin amanne. Daandiin isaa barumsa akka ta'u yaalaniis hin taane. Isaaniis innis yaada hin kaasne. Gammachuu hin qabani jechuummoo miti. Sirba weellisaa hangafaa Wasanuu Diidoo, Jabbilootakoo, gaafa sirbe guddaa gammadani. Ilma abbaa caaletti fudhatani.
Amma garuu Obbo Hundeessaan ilma dhalchan dhaalsisaniiru. Amma Hacaaluun kan uummata Oromooti. Artiistota Oromoo hedduuf walleen waan weellisanii biraa galan miti, aarsaa qaba.Afrikaan yeroo itti aanutti bakka weerarri koronaavaayirasii itti hammatu ta'uu danda'a jechuun Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa WHO akeekkachiise.
Namoota yeroo jaalalaa waliin dababarsuu barbadaniif waqtiimtiin weerara koronaavaayirasii kun hedduu mijataa hin taane. Hangam qabatamaadha? Hospitaala magaalaa Niwu Yoorki keessatti namoota koronaavaayirasiin qabaman yaalaa kan jirtu lammiin Itoophiyaa Dr Tsiyoon Fireewu.
Izaddiin Ahimad hojiilee kalaqaa hedduun beekama.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa: ‘‘Eenyutu Waddeessa eenyutu Jaldeessa?’’
Tibba weerara koronaavaayiras kana ammoo tuttuqqaa harkaa malee meeshaa harka ittiin dhiqatan kalaqee jira. Dhibeen koronaavaayiras ji'ootaan dura Chaayinaa kutaa biyyaa Hubeeyi keessatti mula'ate, yeroo ammaa Ardii Antaarkitikaa malee addunyaa waliin gahuun du'aatii namootaoliif madda ta'eera. Mee kallattii ilaalaa. Iyyeetan kufe. Maatiin kiyya martuu achi kan jiran natti fakkaate," jedhu intala isaanii dhibee Koovidn qabamtee hospitaala Ekkaa Kotabee seentee yeroo arganitti haala ture yeroo himan.
Dhibeen Koronaavaayirasii kuni erga gara Itoophiyaa seenuun dhagahamee, Godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti sirni 'Nu Baraari' jedhamu kadhaa waaqa dhageessisuu malkaa, dirree fi tulluutti bahuun kadhatamaa jira.
Weerara dhibee koronaavaayrasii ittisuudhaaf jecha labsii yeroo muddamaa manni maree bakka bu'oota uummataa raggaasiseen wantoota dhorkamaa ta'an Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Itoophiyaa beeksiseera.
Koroonaavaayiras namni vaayirasichaan qabame tokko yoo haxxiffatu ykn qufa'u, akkasumas bakka gororri bu'e tuqnee, harka keenna faalameen ija, funyaaniifi afaan keenya oggaa tuqnu qilleensi faalame gara keessa keenyatti yoo galu darba.
Oduun Ekuwaadoritti reeffi namootaa daandii gubbaatti namni kaasu dhabamee agarsiisu erga addunyaatti as bahee torban tokko booda, namoonni ammallee maatii jalaa du'e awwaaluuf dabaree eeggatu. Shamarreewwan lama kan koronaavaayirasiin qabamanii amma fayyan seenaa warra kaaniif qoodan qabu. Kunooti dubbifadhaa. Dr Bashaatuu Farradaa dura maatiinsaanii akkuma 'maqaashee barreessuu qofa barattee haa dhiistuuf' jedhamuun barnoota galfama, amma Yunvarsitii Wallaaggaatti Ittaantu Pirezidaantii ta'un tajaajilaa jiru.
Turtii BBC waliin taasisan kunoo dubbifadhaa! Haji Umar Nageessaa ykn Waaccuu Nageessaa, jaarsa biyyaafi manguddoo ganna 84 uummata biratti kabajaa guddaa qaban akka ta'an himamaf. Erga dhibeen koronaavaayirasii dhufee namootni dhukkuboota akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaafi onnee qaban yaalaa argachuuf rakkachuu himu.
Daarektarri Olaanaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr Teedroos erga hoggantoonni Taayiwaan haleellaa sanyummaa narratti raawwatani booda waldibdeen dhalate. Kanaaf ani carraa harma hodhuullee hin arganne" jetti shamarreen umrii waggaa 24 Daraartuu Darajjee. Wiirtun qorannoo Koronaavaayiras magaalaa Adaamaa har'a ykn boru tajaajila kennuu ni eegala jedhame hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaaliistii Oromoo dhimma weerara koronaavaayirasii fi dheereffamuu filannoo irratti ibsa waloo baasaniin Boordii Filannoo Biyyaalessaa qeeqan.
Yeroo ammaa abbaa warraanis vaayirasichaan qabameera. Yeroo dhalli namaa sababa COVID mana manasaatti galee jirutti bineensonni garuu akka fedhiisaaniitti bilisummaan magaalota keessa socho'aa jiru. Godina Silxee magaalaa Waraabee naannno Waashingitan jedhamutti namni gorsa Covid19 ittisuuf kennamu walirraa fagaadhaa jedhu gorsuu isaatiif lubbuusaa dhabe.
Shenzen foon addurreefi saree nyaachuufi gurguruu dhorkuun magaalaa Chaayinaa jalqabaa taate. Ruwaandaatti loltoonni manaa bahuun yeroo dhorkamee jirutti dubartoota gudeeduun himataman. Namoonni labsii Paakistaan akka lammileen biyyattii manaa hinbaane labsite cabsuun sirna awwaalcha fira isaaniirratti argaman to'annoo jala oolfaman.
Dhimmaa laguu irratti gaaffiin doktaraasheerra irra dhiyaateef shamarree lammii Keeniyaa Juliyaan Piitariin, qama saalaa, gadameessaa fi fiixee gadameessaa malee uumamuu ishee gara baruutti ishee geesseera.
Qorataan hawwaa astrophysicist yeroo weerara koronaavaayirasii kanatti meeshaa namni akka harka isaa gara fuulasaatti hin geessine gargaaru hojjechuuf yaalaa ture ofiinuu hospitaala gale.
Sababii inni itti hospitaala galeef ammoo maaginetiitu funyaan isaa keessatti rakkate. Koronaavaayiras: Biyya Awurooppaa tokkittii waa'ee Covid yaaddoo hin qabne. Aawustiraaliyaatti sababa Covid dhorkaa labsame jalaa ba'uudhaaf cidhi ariifachiisaan gaggeeffame.Bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaaliistii Oromoo dhimma weerara koronaavaayirasii fi dheereffamuu filannoo irratti ibsa waloo baasaniin Boordii Filannoo Biyyaalessaa qeeqan.
Dhukkubni kun Biyya chaayinaatti haa eegalu malee deemsa keessa Addunyaa guutuu gahee biyyoota hunda yaaddoo hamtuu keessa galchee jira. Biyyattii keessatti lubbuun namaa gatii dhabeera. Namni guyya guyyaan ajjeefamee, guyya guyyaan wal awwaalaa oola. Qaamni uummata ajjeesu seeraan gaafatamee, seerri lubbuu lammiileef falmus argamee gara abdii uummataa haareessuutti adeemuu dhabe.
ABO hidhamaniiru. Kun waan haaraa miti. Hooggansii fi miseensooni ABO erga dhaabni kun hundeeffamee jalqabee ni hidhamu. Guyyaa borii Bitootessa 1 bara irraa eegaluudhaan hiriira guutuu Oromiyaatti adeemsifamee, dhaaba keenya ABO tiksuuf haa xiyyeeffatu. The lists of these leaders are:.
Gamtessa Boru, OLF economic advisor 2. OLF legal advisors are notified and following the developments. We will let know our people, supporters and members on the developing story. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Gurraandhala 26, Uummati seenaa hinqabne biyya hinqabu. Qaamni seenaa uummata tokkoo haaluu fi soba fakkeessee lallabu qaama biyya sana saamuu barbaadudha. Biyyicha dhabamsiisuuf mallattoolee eenyummaa saba achirraa calaqqisiisan balleessuu, maqaa lafaa jijjiiruu fi seenaa uumatichaa dhabamsiisuun eegalama.Kaleessa kutaafi amantiin walqoodnee argineerra.
Kaayyoon koos Oromummaa dhugaa irratti hundaa'uun saba kana walitti hidhuu dha kan jedhu artiist Caalaa Bultumee gara Itoophiyaatti deebi'eera. Sirbi maastar pilaanii qindaa'aa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee mormuun sirbe fi 'Maastar Pilaanii' jedhamu immoo namoota hedduun akka beekkamu fi jaalatamu isa taasiseera.
Namootni sirbootasaa yeroo dhaggeeffatan qabamanis 'memory card' liqimsiisuu, reebbichi fi hidhaan irratti qaqqabaa ture. Bosona keessaatti jaallan koo biratti muka jala ciiseen barreesse" jechuun Caalaa Bultumee dubbata. Namni tokko waa yeroo hojjetu jijjiirama nan fida jedheeti kan hojjetu, sirbi koo maastar pilaanii jedhus jijjiirama fideera jedha. Dhibeen qabsoo Oromoo hedduu dha kan jedhu artiist Caalaa Bultumee wal morkiin dhaabolii siyaasaa Oromoo gidduu jiru uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa akka qabu hima.
Wayita Keeniyaa keessa turettis mootummaan Itoophiyaa Keeniyaa keessatti isa barbaachisaa waan turef akkasumas irra deddeebin hidhamnaan gara Afriikaa Kibaatti baqachuuf akka dirqame dubbata. Biyyarraa fagaatee sirbus sirbootni isaa garuu biyya keessatti qabsoo finiinsaa fi jijjiirramoota siyaasaa fidaa akka turanis artiist Caalaa Bultumee dubbata.
Ji'oota muraasaa as maqaan artiist Caalaa Bultumee Afriikaa Kibbaatti du'a dargaggoo Mahaammad Sa'id waliin walqabatee heddu ka'uu eegale. Doorsisa sababa du'a Mahaammad Saidin irratti ka'e baqachuunis nama lammii biyya biraa biratti hirkatee akka ture artiist Caalaa Bultumee hima. Ajjeechaa dargaggoo kanaan walqabatee maqaansaa ka'uunsaa tapha siyaasaa akka ta'e kan dubbatu Caalaan "Oromoof nan wareegama malee hin ajjeesu, kijiba guddaatu narratti oofamaa jira" jedha.
Gara biyyaatti deebi'uu isaafis sababni doorsisa Afriikaa Kibbaatti narratti qaqabe osoo hin taanee dammaqiinsa siyaasaa uummata Oromoo fi jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru akka ta'e hima. Artiistiin Oromoo haala jiru waliin tarkaanfata kan jedhu artiist Caalaa Bultumee gaheen artiistii tokkoo haala uummata keessa jiru, wanta gaaris ta'e yaraa uummataaf ibsuu akka ta'e dubbata.
Gara fulduraattis rakkoon siyaasaa uummata Oromootti yoo cimte sirboota siyaasaa sirbuu akka itti fufu, yoo haalli jiru gaarii ta'e immoo aadaa Oromoo fi sirna gadaa cimsuu akkasumas uummata Oromoo biyya keessa jiran uummata Oromoo biyyoota ollaa keessa jiran waliin walitti fiduuf akka hojjetu hima.
Barnootasaa kutaa kurnaffaadhaa addaan kute itti fufuu fi daa'imman abbaa fi haadha hin qabne guddisuu fi deggaruunis wantoota artiist Caalaa Bultumee gara fulduraatti hojjechuuf yaade dha. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Caalaa Bultumee: 'Oromoof nan wareegama malee Oromoo hin ajjeesu' 20 Adooleessa Dhuma bara ture sababa ilaalcha siyaasaa qabun gara biyya alagaatti kan baqate. Sirbichi qabsoo diddaa karoora maastar pilaanii irratti gumaacha olaanaa kan qabu ture.
Keeniyaa hanga Afriikaa Kibbaa Dhibeen qabsoo Oromoo hedduu dha kan jedhu artiist Caalaa Bultumee wal morkiin dhaabolii siyaasaa Oromoo gidduu jiru uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa akka qabu hima.
Artiist Caalaa Bultumee sirbootasaa baay'ee biyya alagaa wayita turetti sirbe. Yakka Ajjeechaa Ji'oota muraasaa as maqaan artiist Caalaa Bultumee Afriikaa Kibbaatti du'a dargaggoo Mahaammad Sa'id waliin walqabatee heddu ka'uu eegale.
Muuziqaa fi barnoota Artiistiin Oromoo haala jiru waliin tarkaanfata kan jedhu artiist Caalaa Bultumee gaheen artiistii tokkoo haala uummata keessa jiru, wanta gaaris ta'e yaraa uummataaf ibsuu akka ta'e dubbata. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Uummata Oromoo Itoophiyaa. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Guutuu Abarraa: Baandii Gadaa deebisnee ijaaruuf jirra. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa: Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada.
Viidiyoo Heelleen, Harargeetti yeroo cidhaa sirbamu 'laaffataa jira'. Isin hin darbiin.
thoughts on “Sirba afaan oromoo haaraa 2019 download”
© 2020 Sirba afaan oromoo haaraa 2019 download – All rights reserved